ရတနာလုပ်ကွက်ပဟေဠိ - ဂန္ထဝင်အခမဲ့ပဟေဠိ | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ » ရတနာလုပ်ကွက်ပဟေဠိ - ဂန္ထဝင်အခမဲ့ပဟေဠိ
ရတနာလုပ်ကွက်ပဟေဠိ - ဂန္ထဝင်အခမဲ့ပဟေဠိ APK ကို
ရတနာလုပ်ကွက်ပဟေဠိ - ဂန္ထဝင်အခမဲ့ကျောက်မျက်ပဟေဠိဂိမ်းရိုးရှင်းသောပေမယ့်ဒါရယ်စရာနှင့်စွဲပါ!
ဒီအခမဲ့ဂန္ကျောက်မျက်ပဟေဠိဂိမ်းနဲ့အတူရတနာ၏ခါနာန်ပြည်ကိုစူးစမ်းပါစေ! သင်ဤရတနာပဟေဠိလုပ်ကွက်ဂိမ်းကစားသောအခါမျက်နှာပြင်ကိုချွတ်သင်၏မျက်စိယူနိုင်ကြလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ Jewel Block ပဟေဠိ - Classical အခမဲ့ကျောက်မျက်ပဟေဠိဂိမ်း၏စွမ်းဆောင်နိုင်
- Amazing ဆိုးကျိုးများနှင့်သွက်သံကို
- အဘယ်သူမျှမအချိန်နှင့်အဆင့်အထိကန့်သတ်။ ဤသည်ရတနာစိန်ခေါ်မှုအဆုံးမဲ့ဖြစ်ပါသည်
- မျက်နှာပြင်ရှိသင့်တော်သောနေရာများသို့ရတနာလုပ်ကွက်ဆွဲ and drop
- သင်ရပိုရမှတ်များ, သင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ပိုပြီးရတနာလိုင်းများ
- အောက်က box ထဲမှာလာမယ့်ကျောက်မျက်လုပ်ကွက်များအတွက်မပိုလွတ်လည်းမရှိသည်အထိအဆိုပါရတနာပဟေဠိဂိမ်းကိုအဆုံးသတ်မည်မဟုတ်
- သင်လိုချင်သောဒီအဆုံးမဲ့ရတနာစိန်ခေါ်မှုအချိန်မရွေးရပ်တန့်ပေမယ့်သင်ဤဂန္ဂိမ်းကိုရပ်တန့်သောအခါအသငျသညျတဖနျပိတ်ပင်တားဆီးမှုပဟေဠိဂိမ်းကိုစတင်ရန်ရှိသည်နှင့်ရမှတ် reset လိမ့်မည်။
သင်သည်မည်သည့်ရတနာလုပ်ကွက် drop မတိုင်မီဂရုတစိုက်စဉ်းစားရန်မေ့လျော့မနေပါနဲ့။ ရတနာပဟေဠိလုပ်ကွက် - ဂန္ထဝင်အခမဲ့ကျောက်မျက်ပဟေဠိဂိမ်းတစ်ခုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရတနာနှင့်ကျောက်မျက်ရတနာပဟေဠိဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ယခုဘလောက်ပဟေဠိဂိမ်းနှင့်သင်၏အခမဲ့အချိန်အတွက်သင့်ဦးနှောက်ထက်မြက်!
ရတနာလုပ်ကွက်ပဟေဠိ - ဂန္ထဝင်အခမဲ့ပဟေဠိ
19.18 ကို MB
ရတနာပေါက်ကွဲမှု - ...
ရိုက်ကူးဎပေါင်းမည် - ...